Ntak emi Họrọ Anyị - Hangzhou AODI Electronic Control Co., Ltd
Site na nkweta AODI, ị na-ahọrọ na-arụ ọrụ a raara onwe ya nye ìgwè ndị odori ngwọta 'ọkachamara.
AODI ji enyocha, imewe, n'ichepụta, ahịa na mgbe-ahịa nke batrị chaja. Anyị na-mgbe niile na-enyocha ọhụrụ teknụzụ na ike ikwu na ha mgbe ha na-eme uche. Ka pụtara ìhè OEM chaja si emeputa ke China, onye obula na AODI bụ na oké ahuhu na ahịa mbụ bụ na bụla n'uche ndị mmadụ.
AODI amalite ya azụmahịa kemgbe Jan nke 2010 na akpata elu aha si ahịa anyị gụnyere China na esenidụt na àgwà ngwaahịa na n'elu-notch ọrụ. E nwere 4 mmepụta edoghi ugbu a na 3 R & D Centers na ọrụ injinịa na technology.
Ahaziri chaja na-nabatara na AODI. Ma na ị chọrọ a ọhụrụ ma ọ bụ a nnọchi chaja, mmezi, ma ọ bụ oru ndụmọdụ, Aodi bụ mgbe onwe na-ege ntị ihe i kwuru na nye ọrụ na gị mkpa. Plus, na-edu ndú oge maka ihe ọ bụla nlereanya gị a raara n'ime 7 ụbọchị.